Sabayon, pamwe inonyanya kushandisa ushamwari distro | Kubva kuLinux
Sabayon, pamwe inonyanya kushandisa ushamwari distro
pandev92 | | Chitarisiko / Kuita munhu, Kugoverwa, GNU / Linux
Mushure mekusiya Ubuntu masvondo maviri apfuura nekuda kwekubvaruka kwakatanga kunditsamwisa Compiz game MPlayer dzimwe nguva uye kupenya, ndakazviwana ndichisvetuka kubva ku distro kuenda ku distro, kubva PC Linux OS, mumwe debian-sid, mumwe Chakra, asi pavo chete iyo yandakanga ndada aesthetically uye mukuita yaive PC Linux OS. Apa ndipo pandakasangana nemamwe matambudziko andinotarisira PC Linux OS gadzirisa rimwe zuva uye izvo zvandinofunga zvakakomba:
- PC Linux OS Iine mapakeguru ekare uye akagumburwa asingadi kushandura kunyange iwe ukaikumbira: Skype 2.2 mune x64 vhezheni, ffmpeg kubva makore maviri apfuura uye isina 10-bit rutsigiro, VLC isingakwanise kutamba mkv, Tomahawk mushanduro 0.3 (Ari pa0.6), Spotify pa0.6, makore maviri apfuura (zvisingaite uye kupaza).
Pakupedzisira mushure mekuzivisa zvinhu izvi pamaforamu PC Linux OS, uye ndichiregeredzwa, ndakaneta neiyo distro ndokuenderera mberi nekutsvaga kwangu ndipo pandakarangarira sabayon, distro iyo mwedzi yapfuura ndakaedza kuisa paPC nemifananidzo AMD pasina mhedzisiro, asi ikozvino ini ndaigona kuyedza pc yangu ne NVidia.
Ndakagadzirira kurodha pasi maigigiti maviri eziso, ndakazvinyora pendrive uye zvese zvakangoshanda uye yaive eye yezwi kubva pakutanga, madhiraivha e NVidia chivakwa chakatanga kubva pakutanga, Chromium ine Flash yaivepo mune iyo iso uye chimwe chinhu chandinokoshesa zvakanyanya, mafonti edesktop akataridzika zvakanaka kubva pakutanga (anotsoropodza Debian / Archlinux / OpenSuse / Fedora).
Iyo yakapusa yekumisikidza, yakandiyeuchidza nezvayo Fedora dzekare, mumaminitsi gumi ndaive nehurongwa hwakagadzirira uye hunoshanda. Ndakafarira kusarasikirwa neSplash nevatyairi veNVidia, sekunge zvaigara zvichiitika kwandiri muUbuntu uye ndakashamisika kuti yakadzoka sei GNOME Shell mune ino distro, iyo mune chero imwe distro yandakanga ndaona yakanyanya kuyerera.
Kusarudzwa kwemapakeji kwakakura, iwe unogona kuwana kubva kuSpotify mune yayo yazvino vhezheni, kune Steam, IDJC, Urban Kutyisa, Tomahawk, ese ari maviri Chrome neChromiun, VMWare Player, nezvimwe, zvese munzvimbo yekuchengetera pasina kunge uchifanira kutarisa mune zvekuchengetera zvekunze kana kuenda kuisa ne pkgbuilds senge muArch (kunyangwe iwe uchigona zvakare kushandisa Gentoo ebuilds).
Ini zvakare ndakashamiswa neyakareruka yekuvandudza iyo Kernel nemadriver e NVidia. Nezuro chaiye ndaida kuisa iyo Kernel 3.8.5 uye ini ndaingofanirwa kuisa diki package ye NVidia izvo zvakandibvumidza kuti ndiite iro blob rishande zvakananga mune iyo kernel futi, pasina kudzosera module uye pasina madrama ayo andakave neakawanda muUbuntu (zvinhu senge mutyairi anoshanda mu 3.5 kernel asi kwete mu3.6 kana zvinopesana).
Ini zvakare ndinosimbisa rutsigiro rwekusingaperi rweUFI uye Optimus malaptop, pamwe neiyo kernel ine bfs zvigamba zvinopa yakagadziriswa desktop desktop.
Saka ndine chokwadi chekuti ndinogona kutaura kuti kana iwe uchida kubuda ropa kumucheto, kana iwe uchida kuve unowirirana, asi panguva imwechete yakatsiga, uine nharaunda yakanaka, nyore kubata, kugadzirisa nekuchengetedza, pamwe nekureruka kuisa, isina kupambadza imwe nguva, kugadzirisa zvinyorwa, zvinyorwa zvemafaira nezvimwe, Sabayon, idistro yekufunga nezvayo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » Chitarisiko / Kuita munhu » Sabayon, pamwe inonyanya kushandisa ushamwari distro
Hmm ... Ndiri kuda kuziva ... Ndeipi vhezheni yeKDE yaunayo?
kuteedzera kunama kubva kuSabayon webhusaiti "GNOME 3.6.2, KDE 4.9.5 (yakakwidziridzwa ku4.10.1 painongowanikwa), Xfce 4.10, LibreOffice 3.6.3"
Izvo zvinobva kune iso mwedzi miviri yapfuura! Paunongo gadziridza yatovepo, asi kune zvekare zvezuva nezuva isos, usakanganise nezve vashandi!
kde 4.10.1, ndinofunga
Zvakanaka, ini ndinosimbisa kuti ndeye 4.10.1, ini ndakangozviona mune repo
Paive nenguva apo Sabayon naNova vaive hama diki, vakagovana equo, ini handizive kana Sabayon anoshandisa kubuda zvakare, Nova akabatanidza zvese, kubuda kwemanyuko uye equo yemabhanari, mubatanidzwa unonakidza, chokwadi handizive kana Sabayon akaramba achitsigira equo UI yakagadzirwa naDH Bahr, Nova mushambadzi; Sabayon naNova, vanopambadza vanakomana veGentoo asi ipapo Nova akachinja kubva .tbz2 kuenda .deb, kubva kuGentoo Kubva kuUbuntu LTS Yakavakirwa, Regards.
Ndisati ndasvika paChakra, ndakaedza kuyedza Sabayon, asi pandakasvika padanho rekuparadzanisa ma disks, ndakawana kukanganisa kwakanditadzisa kuenderera. Ndichiongorora, ndakapihwa zano rekuparadzanisa ma disks neimwe distro muLive mode, wozoedza, asi ndakafemerwa nazvo. Kubva ipapo handina kuzombozviedza zvakare. Kunyangwe ndichifanira kutaura kuti Rarama vhezheni ibara!
Ini ndinongoisa otomatiki kupatsanura, ini handidi kuve neanopfuura distro imwe pc!, Saka ndakasiya distro kuti igovane, uye chero zvodii, iwe unogona kugara uchiisa gparted pane live cd uye woita kupatsanura
Ndakaedza izvozvo asi panguva yacho zvakaramba. Ndinovimba kuyedza pane imwe nguva. Parizvino ndiri kugadzirira kuendesa yangu yese system kuDebian.
Uye nekuti iwe unosiya Chakra, ini ndaedza akati wandei madistros mwedzi ino, uye chokwadi chakra uye arch ndiyo yakanyanya kuyedza yandakamboedza, chete kuti ndine husimbe hwekuisa arch uye chakra ine zvese zviripo.
Zve @ st0rmt4il uye @ F3niX. Chakra ndiyo yakanakisa KDE distro yandakamboedza. Inokurumidza uye inotaridzika kutarisa, uyezve inogadziriswa nguva nenguva. Asi ini ndakatarisana nedambudziko rekutsakatika zvachose Windows kubva palaptop yangu, uye ndiri kutsvaga distro yakagadzikana. Nehurombo, naChakra ndanga ndine matambudziko maviri kwemwedzi, izvo zvandisina kukwanisa kugadzirisa kusvika parizvino. Nezve zvese zvandatumira pane Chakra Project maforamu, asi ini handina kuwana mhinduro, kunyangwe kunyora muChirungu. Ndosaka achiisiya, aine kariro, nekuti kwakatenderedza pano vanoziva kuti ini ndagara ndichizvidzivirira (ndisina kuwira mukunyanyisa, hongu). Uye kwandiri, danho rinonzwisisika mukugadzikana ndiDebian, iyo yandinoziva zvishoma nezvayo. Zvichida rimwe zuva ndinodzokera kuChakra. Zvandisingafunge kuti zvinombomira ndeye KDE.
Debian? .. uye chii chakaitika kwauri iwe Chakra murume?
Ehe, chenji yako inondishamisa hehe!
Zvakanaka, kupatsanura ma disks une sarudzo zhinji .. man fdisk man cdisk, hachisi chinhu chaunofanirwa kuziva kushandisa kemikari yenyukireya
hahahaha, panguva yacho ini ndakanga ndisingazive. Iye zvino ndinoziva zvishoma.
Ivo havandibhadhare kuti ndipe maonero angu akadaro
Uye inotorwa kubva kuGentoo! Iyo GNU / Linux metadistribution par kugona (:
Pindura kune ini handina kubhadharirwa maonero angu
Hongu, asi haishandisi portage asi entropy, bhaisikopo package
Kana ikashandisa portage, inoshandisa zvese zviri zviviri, unogona kushandisa rairo "equo" kune mabhinari uye "kubuda" kana iwe uchida kuunganidza mapakeji kubva kuGentoo repos, asi rangarira kuita "kubuda - snc" kutanga.
yakatorwa kubva pawiki yake… «Portage (kubuda) haisi iyo yekutanga package package yeSabayon Linux, uye chinyorwa ichi ndechevashandisi vemberi chete. Mune mamwe mazwi kana izvi zvikatadza iwe, imhosva yako. Wayambirwa. »
zvakare kana iwe ukasanganisa iyo 2 unorasikirwa nehunhu hunopihwa nePortage ... hazvina kufanana ..
Zviripachena kuti haisi maneja wekutanga uye kuti kuishandisa iri pasi pebasa rako, asi pano hapana akataura neimwe nzira, ini ndangotsanangura kuti portage iri muSabayon uye inoenderana, ichiti zvinopesana inhema sekureva kuti Manjaro haitsigire AUR ichivakirwa paArch.
Ini ndangoshandisa portage yemamwe mapakeji uye pasina dambudziko, chokwadi, iwe unofanirwa kuzvizivisa iwe zvishoma zvishoma, mune ino kesi portage inofananidzwa ne archlinux aur
Ndo zvandiri kureva "pandev92", ini ndanga ndichishandisawo Sabayon kwemwaka uye ndaishandisa portage kune zvese, ini ndakaisa zvese kubva ipapo uye handina kana kumbove nedambudziko, chii chimwe, ini ndingashinga kutaura kuti portage yakavimbika uye inoenderana naSabayon kupfuura AUR ine Arch.
lol… mafungiro iwayo anotarisirwa kubva kuDebian…. !!
Unoreva wangu here? Ini ndaishandisa sabayon ndisati ndachinjira kuDebian
Uye iwe wakamusiya nekuda?
Yakanaka kwazvo distro, asi iyo nyaya yekuti inouya nemidziyo yekutyaira nekukanganisa inokonzeresa mamwe makadhi evhidhiyo eADD, sezvo madhiraivha ekambani iyi yeLinux achisiya zvakanyanya kudikanwa.
Gnome Shell semuenzaniso ndinorangarira kuti zvaive zvisingaite muSabayon 9, nekuda kwekunetseka kwevatyairi. Uye zvinoita kunge pasina nzira iri nyore yekumisikidza yemahara AMD mutyairi nekutadza.
Iwo anga ari mwedzi yapfuura, zvinoshanda zvakajairika izvozvi, pamwe neamd madhiraivha. Uye kana iwe uchikwanisa kutanga nemadhiraivha emahara, uchichinja paramende yeiyo kernel bhuti, mune inorarama cd, asi izvozvi handicharangarira, ndinofanira kuitarisa, ndakanga ndambozviita kare kare.
Sabayon anoshanda sei kwauri neGnome Shell?
Zvakanaka zvirinani kupfuura mamwe ese distro, asi chokwadika, iwe unofanirwa kutarisa kuti ndeipi giraidhi kadhi rauinaro ...
Nenzira, kune mazuva ese isos
Ini handifunge kuti GNOME Shell ndiyo yakanyanya "mushandisi zvine hushamwari" yatingati.
Asi zvakadaro zvinouya nemamwe madhesiki.
Ndakaiyedza nguva yadarika ndikaona kuti handikwanise kuisa madhiraivhi eNVidia nekuti sezviri pachena vaisapindirana neiyo yazvino vhezheni yeX.org, uye sezvo iyi vhezheni yakanga yatodarika mwedzi mitanhatu, vakaivandudza uye neavo vaida kuisa vatyairi veNVidia (kana, zvakatoipisisa, izvo izvo zvaive zvatoiswa) zvaizotinetsa uye kuti yaive mhosho yaNVidia.
Iyo graphical package maneja zvishoma zvishoma, nenzira.
Sabayon yakavakirwa paGentoo, asi nyasha dzaGentoo ndeyekugadzira iyo system kuyera, uye kana iri kubva padanho rekutanga iri nani pane zvirinani Dambudziko neSabayon nderekuti kana uchiedza kuve unoshanda-zvine hunyoro unosanganisira marara mazhinji anoita kuti system inonoke. Kunyanya panguva yebhoti. Kune rimwe divi, kusarudzika kwepakeji kusarudzwa hakusi kwakanyanya kupfuura zvese, izvo kubva pakuona kwangu. Mukufarira kwayo, ndinogona kutaura kuti ndiko kugovera kwakachengeteka mukati meiyo yechimiro chinotenderera, mupfungwa yekuti mikana yekuti chimwe chinhu chingamire kushanda pamwe neyakavandudzwa inotevera haigone. Kunyanya muchikamu che Hardware nekuti nyowani kernel vhezheni dzinofanirwa kuiswa neruoko.
Honestly Ruffus, ini handicherechedze inononoka bhutsu pane debian sid / kuyedza kwandakaedza mazuva maviri apfuura
Inenge iri mhosva kuti chero kugoverwa kukanganisike ne 3570K kuva akatendeseka ... Kunyangwe ini ndichiramba ndiri pachinzvimbo changu zvichienderana neruzivo kuti inononoka kupfuura kumwe kugovera kutanga. Kunyangwe iyo mubairo unokundwa naUbuntu.
Ndine urombo asi Sabayon inononoka kutanga kupfuura Ubuntu mune zvese. Ini ndakazviongorora pane ese HDD uye SDD uye mhedzisiro yacho yakafanana.
Uye zvakafanana kuisa zvigadziriso kana mapakeji.
Imwe slip, ndeye SSD.
Ndakaedza chinhu chimwe chete, uye hongu, kana ndikatanga nehunhu uye iyo nyowani, zvinotora sekondi imwe kushoma ubuntu, asi kana ndikatanga zvese zvakaenzana, nemutyairi weNvidia, zvinotora ini masekondi manomwe ese, uye mumavhiki mashoma mu sabayon ichave iri Iko kutama kubva ku openrc kuenda ku systemd d kunowanikwa kune chero munhu anochida, yeuka kuti kazhinji nguva yebhoti haina kukonzerwa nechinhu chero chipi zvacho kunze kwenzira iyo yatanga nayo. Haisi dambudziko, rinogona kugara richivandudzwa, kubvisa zvinhu zvausingashandise.
Zvekuvandudzwa, apt-tora inononoka, senge equo, mutsauko ndewekuti sabayon ine inononoka zvinyorwa, ndizvo zvandakaona, hapana chimwezve.
Ini ndinobvumirana newe pane iyo nyaya yemapakeji ekutanga!
Hehe, nezuro husiku ndakaisa Sabayon 🙂
Imwe nguva yapfuura, munguva dzangu se distrohopper, ndakaedza kuiisa mushanduro 9 ne KDE, asi iyo LiveCD haina kupfuura mhasuru. Pakupedzisira ndakakanda mapfumo pasi asi ndakasara nechido. Rimwe zuva ndichaedza zvakare, asi neXfce.
Ini ndakaiyedza paNVIDIA laptop ine optimus tekinoroji uye inondiudza kuti kadhi rangu harina optimus, harina kundigutsa, ndinofarira PclinuxOs
Pindura kuna joseucker
Sabayon yakagara ichibva pane yakawanda ichienda kushoma. Netruner yandishamisa kwazvo uye chakra mitemo !!!!
Ndokusaka iwe uchishandisa ubuntu LOL
Achaisa zvaari kuda asi ini ndine netruner. Zvakare chirevo chako hachireve kuti kune chakra yangu ndiyo yakanakisa prokde distro uye iyo netrunner iyo yandakagara nayo yakandishamisa.
Nenzira iyo ini handikwanise kunzwisisa chero chinhu nezve Kubatana ...
Ini ndatoitora pasi neGNOME ikozvino kuyedza izvo
Kune chero rubatsiro, ini ndiri pano. Tarisa uone repo uye iwe uchaona kuti kune zvese, zvakatopfuura ubuntu.
good distro anowirirana ... kunyangwe ini ndisingashinga kuiyedza, zvinondinetsa kusiya arch
Manjaro distro yekufunga nezvayo uye neimwe pfungwa mumaonero angu yakanyanya mushandisi kupfuura Sabayon, pamusoro pezvo, zvinoenderana nechinzvimbo cheManjaro distrowatch iyo ichangopfuura kupfuura Sabayon yaakakunda uye zuva rega rega kuwana mukurumbira.
Ini ndiri mushandisi weSabayon uye zvakanaka, kunyange hazvo ndave muWindows XP, imhaka yekuti ndiyo nzvimbo yerabhoritari kuyunivhesiti uye pano ndiri kunyora nekuti ndakaona kuziviswa kwechinhu ichi pafoni yangu.
Chimwe chinhu, Sabayon neimwe nzira kana kuchinjanisa desktops kwaparadza Sabayon yangu neXFCE, ini ndakaisa matte vhezheni nekumira uye toggle uye kuisa xfce uye mushe, zvese zvakanaka asi, senguva dzose, pane asi, maapplet akatanga kutsakatika. yepaneru iyo yaireva vhoriyamu, bhatiri, network, nezvimwe.
Iko hakuna chikonzero chekuishoropodza asi ini ndinofungidzira kuti inofanirwa kunge iri bug.
Parizvino ndiri paFedora, Manjaro naSabayon 😀
Ini ndinofunga zvakataurwa nguva zhinji kuti distrowatch hachisi chakavimbika chidimbu che data, sekureva distrowatch mageia, yaizove nevashandisi vazhinji kupfuura ubuntu uye izvo manyepo ...
Distrowatch yakavakirwa pamabhatani anoitwa nevanhu kuma distros anoonekwa pane avo runyorwa ... saka hazvishamise kuti nzvimbo dzinogara dzichingogara dzichingogara.
Zvakanaka, nekuti iro peji rinongova rakakura kushambadzira risina hwaro, zvakare kungofunga nezve chinzvimbo chedistros inoratidza kuti iyo yekutanga ndiyo yakanakisa pane zvese izvo zvakare ari manyepo kana kusiri kutaura kuti ihombe blowjob
Ini ndinotenda nemoyo wese kuti mushandisi anofanira kutsvaga distro uye imwe inomubvumidza kuti ashande uye arege kunetseka nezvekuchinja ese maviri neatatu, dambudziko kwatiri isu vashandisi nderekuti isu tinogara tichitsvaga chimwe chinhu chitsva, uyezve tinopedzisira tatyora distros uye zvinhu zvakasiyana-siyana, asi zvakadaro, ndinofungidzira inguve versionitis
hehe .. zvinoita shamwari! .. zvinoita hehe! "Versionitis"!
Uye nah, zvinoitika ndezvekuti iyo MATE vhezheni yeSabayon 11 haina kupenyeswa sezvatinotaura! : s
Kubva pane zvandinoona, manajro ndinozviona zvirinani pane Arch.
Iyo Aur zororo.
Kugadziridza madhiraivha evhidhiyo, xorg uye kernel haisi yehusiku.
Asi ini ndinozviona zvine mudonzvo mudiki, uye nezvimwe mu KDE.
Izvi zvinodaro nekuti:
Yekutanga: vanotarisa zvakanyanya kuXFCE pane mamwe maratidziro ekuwedzera, pamwe mumaonero angu, manjaro inochengetedza mamwe maratidziro kungokwezva vashandisi vatsva nedzimwe nzira dzeXFCE, uko kwakanyanya kusimbiswa.
2nd: nekuti iri nyowani uye nekuti padanho rehierarchical ine vanhu vasingasvike gumi nevashanu muchikwata chayo (ndinofunga), uye sezvo paine vashoma pane vashandisi vashanu, zvimwe zvese ndezvekuchengetedza server, webhusaiti, foramu uye rimwe kana rimwe basa.
Ndakafarira kumhanya kwazvo uye ndakaona kuti pacman iri nyore uye yakapusa pane kuwana, kuwedzera kune chokwadi chekuti muAUR ini ndawana mafomu ekuti kuti ndivaise muXubuntu ndaifanira kugoogle iyo .deb ... ndicho chinhu chega chandisina aifarira ndechekuti mafonti haatarike kunge akanaka (nerombo rakanaka ndawana mhinduro pano: http://deblinux.wordpress.com/2013/03/02/tip-mejora-y-mucho-el-renderizado-de-fuentes-en-manjaro-linux/) Uye kuti ine dzimwe nyaya ne pacman, izvo zviri nyore kugadzirisa (http://wiki.manjaro.org/index.php/Pacman_troubleshooting)
Kwete zvakaipa zvachose Manjaro Xfce, asi iri RR uye inogadziridza neinoshamisa kumhanya. Unogona kuisa chero chaunoda, asi (Kune nguva dzose asi) Ini handikwanise kuwedzera purinda yangu, zvirinani kwenguva pfupi Zvisinei, yanhasi, ndiri kugara naManjaro Xfce.
Ini handidi mushandisi anoshamwaridzika distro .. Ini ndoda chimwe chinhu chiri nyore .. ndosaka ndichishandisa arch
Ricardo Lizcano akadaro
Ini ndanzwa zvinhu zvakanaka kwazvo nezve sabayon, kunyangwe ndichifarira desktop yeLXDE; ndosaka ndagadzira dhiki dhonza neiyi desktop, sezvo shamwari dzangu dzaida kuyedza linux kutadza uye kuti iite ichikurumidza pamabhuku avo.
Iyo ine vhidhiyo vatambi, mimhanzi, codecs, madhiraivha, mufananidzo, hofisi nezvimwe zvinhu. Zvakare, kuti iwe unogona kuisa chero chaunoda kubva kune yepamutemo debian repositories.
Hechino chinongedzo uye zvakare chiri livecd, saka unogona kuzviedza uye kana usingaifarire, hapana chinoitika.
Pindura Ricardo Lizcano
maoko angu madiki anopisa nekuyedza ...
mumwe munhu angave akanaka kwazvo kuburitsa kuburitswa kwemahara kuraira
Kuti uone kuti gondohwe rinodyiwa zvakadii, ndezve netbook yevakura vanhu vane Intel graph 😀
Zvakanaka, mumakomputa pamwe zvinouya kupfuura 2010 unogona kuzvishandisa pasina matambudziko.
Asi zvinoenderana neshanduro ine "x" desktop, kana iwe ukaisa KDE iwe unoziva kuti iwe uchazoda yakawanda RAM.
Chinhu chakakosha kukurudzira:
40GB Yakaomarara Dhiraivha
Ini ndinofunga ndicho chinhu "chekutanga" kugona kushandisa Sabayon, kana iwe uchida zvimwe kubva ipapo unogona kuzvipa neine i7 yaunayo ipapo ne8 GB ye RAM hehe 😛
Ini ndinofunga unogona kuzviedza .. asi iwe ungasarudza chaizvo KDE senzvimbo yako? .. I think une zvimwe zvekutanga handiti? . Ndingakurudzira kana iwe uchizoshandisa sabayon nekuti iwe unobvisa KDE uye zvese zvayo zvekushandisa unofanirwa kutarisana nenyaya yekuti muchina uyu hausi iwo wazvino saka kukoshesa kwako kuita kwete runako rwezvakatipoteredza uye iwo mabhujobs
Kde ichiri kukwanisa kumhanya yakakwana pamushini uyo, iwe unongoda kudzima nepomuk, kubvisa mhedzisiro yeoksijeni, uye kumisikidza iyo render mode, ichashanda zvakanaka. uye inongodya chete neUSA. Pasina kurasikirwa nezvose izvo kde zvinotipa isu.
Uchishandisa kde seizvi, zvakafanana nekushandisa windows isina aero LOL.xrender zvakare haina vsync ...
Nekudaro, kuishandisa seizvi kuri nani kupfuura nharaunda zhinji, ndinoshandisa izere, ini ndakangopa sarudzo mune yangu kesi ndingadai ndakashandisa xfce.
KDE ine modular, inogona kuchinjika ... http://i.imgur.com/zU0mTiN.png
Mhoroi, ndakaiisa pakaburitswa bhuku reblog uye ini ndaive dzakawanda shanduro dze sabayon, ndinofunga yakasvika X, pavakabvisa rutsigiro rweavo magirafu.
Maonero angu: yakanaka kwazvo distro, yakanaka kutanga nekupinda zvishoma nezvishoma, ine hushamwari, equo (ndinofunga yaidaidzwa iyo) yaive nesimba kubva mumaonero angu panguva iyoyo, ikozvino ini handina kukwanisa kukuudza, ikozvino Ndiri naArch naPacman wake anoshamisa [——C oooo]
uye naDebian Wheezy seyechipiri distro
Hongu, hauna kukanganisa compa, "equo" ndiye maneja wayo wepakeji uye nekudaro, maererano nebhuku re lxnay, rinoona nezve sabayon rakanyorwa patsva kubva pakutanga, kuwedzera uye kugadzirisa zvikanganiso kubva mushanduro dzekare.
Sabayon! Kwakanaka distro. Ini ndaishandisa vhezheni X neGnome Shell kwechinguva uye yakabhururuka. Uye kuti timu yangu yatove mamuseum.
- 2GB ye RAM
- NVIDIA GeForce 7300 GT ine 256 MB yekuyeuka.
Iwe unofanirwa kuve wakangwarira zvishoma mune zvinogadzirisw (ndinoreva kuti usape iyo yekupusa yakapusa) nekuti mune dzimwe nguva kupindira kwevashandisi kunodiwa. Asi muchidimbu: inokurudzirwa zvachose distro, iyo inoda zvishoma ruzivo kupfuura vamwe.
Ini handina kumbobvira ndarohwa neiyi distro. Iyo ine yakanaka kwazvo wongororo asi ini handidi kuziva kuti ndiyedze.
Ndiri kuda kuziva, ingangoita mwedzi miviri mushure mekushandisa KDE uye chakra, zvese zvinoshanda mushe, chete ma bundles chete haandigutsi, ndinoziva ndezvekuti system ive "yakachena", ndichiri kuzvipa mvumo yekuyedza sabayon, uye ini ndichakuudza.
Pindura kuna Ellery
Kufanana neiyi Manjaro kana iwe uchida chimwe chinhu kuArch nePacman uye isiri-inorambidza KDE, unogona kunyatsoisa kunyorera kweGTK.
Kurumidza kwazvo, kugadzikana uye RR!
Iwe unofanirwa kuedza ROSA «Desktop nyowani» uye upe wongororo yakanaka nezve ruzivo rwako,
Imwe yandinonyatsoda ndeye PC-BSD, asi ivo vari mukuita shanduko, ivo vari kuita BSD distro Rolling Release uye ine ramangwana rakanaka kwazvo.
Ini ndinosiya pfupiso: Moondrake iri kuuya here? Forogo yeMandriva kana Rosa? haha zvishoma zvekufungira uye munguva pfupi ivo vachazoziva 🙂
Pindura kuna AleQ
ROSA nyowani ine yakanaka yekuchengetedza?
Rosa's repositories inofanirwa kuve yeiyo yakazara kwazvo pane ese .. uye nekukurumidza kugadzirisa !!
BSD inotenderera, iwe unoti Arch-BSD ?? kana pane mumwe
PC-BSD iBSD inoshanda sisitimu, yakavakirwa paFreeBSD uye ndiyo yakapusa BSD sisitimu yekushandisa, kunyangwe kupfuura mamwe linux distros, iri nyore senge ubuntu, magiea, pink, openuse. nezvimwewo.
PC-BSD chirongwa chine makore echiitiko, ikozvino ivo vafunga kuzviita Rollig, uye ivo vari kutoshanda pairi,
Kunyatsopeta rolling hakuzove .., kungoti hakufanirwe kudzoreredza zvese ..., zvakafanana nekusimudzira kubva kubuntu 12.10 kusvika 13.04
Ini ndakaita senge pasina chinangwa pane linux ... hapana distro inondisimbisa, ikozvino pasi peiyi, ndinoiyedza uye tichaona zvinoitika
Inodaidzwa kuti 'distrohopping'.
Edza iyi kuti uone kuti zvinofamba sei.
Chichava chinonakidza asi chichava nerutsigiro rwe sinamoni
ndine urombo, ndanga ndakanganisa, ini handina kuronga kuzviisa pano
"Pakupedzisira mushure mekumhan'ara zvinhu izvi kumaforamu ePCLinux OS, uye ndichiregeredzwa, ndakaneta nedistro ndikaramba ndichitsvaga ..." Akanga achishandisa PCLinuxOS kwenguva yakareba kusvika ndazoona kuti maforamu ake aindibata zvakaipa , Ndafunga kuita zvakafanana newe ...
Ini ndinoramba ndichimanikidza ... edza Pear OS 7 ... Ndine chokwadi chekuti hauzombozvidemba; dzimwe tsananguro nezveiyi distro pano: http://germanlancheros.blogspot.com.ar/2013/04/disponible-pear-linux-7-64-bits-y-server.html
Ndakaiyedza vhiki rapfuura uye nekuvimbika, ini ndine yangu osx ..., ini handioni kukosha kwekuyedza pear os, enzyme, mushure mekuiisa, yakarovera nekukurumidza ...
Ndanga ndiine Sabayon-Xfce kwemwedzi yakati wandei uye ruzivo rwange rwakanakisa. Kushandisa sabayon-vhiki nevhiki repositori kwakandibvumidza kunakidzwa kutenderera kwakadzikama padivi paEntropy uye equo.
Zvinondirova kuti mumaforamu uye irc, nhengo dzichiri kuve neushamwari, dzinokurudzira kusimudzira kwevashandisi uye kuramba kutsamira. Nekuda kweizvi ndinofanira kuziva zvishoma nezve Sabayon uye Gnu / Linux.
Chaizvo :), maforamu akanaka, ane hushamwari, vanoziva zvakawanda uye iyo distro yakanyatsogadzikana! Ndatenda nekutaura.
Ichaedzwa, ini ndatova neOpenSuse uye Manjaro pane izvo zvinyorwa.
Iwe wakangofanana neni ipapo. Mushure mekunge ndaneta neUbuntu, ndakaedza zvese ndokuguma neOpenSUSE, iyo distro inokurudzirwa kwazvo, chinhu chakaipa ndechekuti haisi Rolling Kuburitswa nemasikirwo, asi unogona kushandura zvinyorwa zveTumbleweed uye zvinofungidzirwa inoita Rolling Kuburitswa.
Zvisinei, pakupedzisira ndakaiburitsa ndokuichinjisa kuLMDE nekuti ini ndaitsvaga distro yekushandisa neCinnamon. Nekudaro, ini ndakanga ndisina kugutsikana zvizere nekuti zvandaitsvaga ichokwadi Rolling Release, iri nyore panguva imwechete uye kupfuura chero chinhu chakagadzikana. Saka ndiri pano, nhasi ndaisa Manjaro naSabayon, iyo inofanirwa kuve yakanakisa iripo panguva ino. Ini handisati ndaita pfungwa dzangu nekuti ndinoronga kuzviedza kwemwedzi mudiki, asi ini ndinokuudza kuti isa imwe yeaya maviri uye kana ikasakubvumidza, isa OpenSUSE.
Chingave chinonakidza asi chichava nerutsigiro rwe sinamoni?
Ndizvozvo: gnome-yakawedzera / sinamoni-1.6.7.
Ini ndinofunga inogona kuiswa, asi handizive kuti ichashanda sei.
Mhoroi, ndiri mune kukahadzika nezvekuti ndeipi distro yekuchengetedza. PCLinuxOs uye Sabayon dzimwe nzira dzangu mbiri. Zvino, mushure menguva ino, ungati here Sabayon ichiri yakanakisa sarudzo yevaviri?
Gadzira edu maQt maapps shandisa iyo GTK + theme
Maitiro ekugadzira iyo "yekudzosera poindi" naClonezilla